Fandaniana volavolan-dalàna teto anivon’ny Antenimiarandoholona – Sénat de Madagascar
Fandaniana volavolan-dalàna teto anivon’ny Antenimiarandoholona
Lany tsy nasiam-panitsiana teto anivon’ny Antenimierandoholona ny talata 05 febroary 2019 ny volavolan-dalàna laharana faha 001/2019 tamin’ny 24 janoary 2019 manome fahefana hanao lalàna ny Filohan’ny Repoblika sy volavolan-dalàna fehizoro laharana faha 002/2019 tamin’ny 24 janoary 2019 manova sy mameno ny fepetra voalazan’ny andininy sasantsasany amin’ny lalàna fehizoro laharana faha 2018-010 tamin’ny 11 may 2018 mikasika ny fifidianana ireo Solombavambahoaka ao amin’ny Antenimierampirenena.
Noho ny fahataperan’ny fotoam-piasan’ireo Solombavambahoakan’I Madagasikara ny talata 05 febroary 2019 amin’ny 12 ora alina dia tsy afaka manao ny asa fanaovan-dalàna ny Antenimierampirenena, izany hoe: misy ny “vide institutionnel” ary araka ny voalaza ao amin’ny andininy faha 84n’ ny Lalàm-panorenana rehefa tsy mivory ny Antenimierampirenena dia tsy afaka mandinika ny raharaha nangatahin’ny Governemanta ny Antenimierandoholona.
Noho izany dia rariny raha mangataka fahefana ahafahana mamoaka lalàna amin’ny alalan’ny hitsivolana mandritra ny fotoana voafetra sy mikasika toe-javatra voafaritra ny Filoham-pirenena entiny manatanteraka ny praograman’asany araka ny voalaza ao amin’ny andininy faha 104n’ ny Lalàmpanorenana ka nanolorana ity volavolan-dalàna laharana faha 001/2019 tamin’ny 24 janoary 2019 ity.
Ny volavolan-dalàna fehizoro laharana faha 002/2019 kosa dia milaza ireo fepetra rehetra arahina momba ny fifidianana Solombavambahoaka izay hotanterahina ny faha 27 ny volana mey ho avy izao. Natao io volavolan-dalàna fehizoro io mba hampirindra ny fampandrosoana eny amin’ny faritra tsirairay ary mba hialàna amin’ny fitongilanana raha ny voalaza ao amin’ny tatitra nandritra ny asam-baomiera.
Voalaza ao fa miisa 200 ny antoko pôlitika vita enregistrement sy ara-dalàna.
Nandritra ny ady hevitra izay nataon’ireo Loholona no nahitàna fa betsaka amin’izy ireo no niahiahy tamin’ny fandaniana ny hanomezana fahefana ny Fiolhan’ny Repoblika hanao lalàna, tao aorian’ny fifandresen-dahatra dia niarahan’ny rehetra nandany ny volavolan-dalàna.
Nitarika ny fivoriana ny Filohan’ny Antenimierandoholona Rivo RAKOTOVAO notronin’ireo mpikambana ao amin’ny Birao Maharitra ary natrehin’ireo teknisianiana avy ao amin’ny Minisiteran’ny Atitany sy ny Fitsinjaram-pahefana notarihin’ny Minisitra RAZAFIMAHEFA Tianarivelo.